Dhibaatooyinka flyght Concord
Dhibaatooyinka flyght Concord sano 2 11 bilood ka hor #713
mid kasta ma leeyahay dhibaato duulaya Tawfiiq ah? mid ka mid ah ayaan arag ka helay waxaa doonaysaan inaad i dishaan .... (bounces iyo ruxruxaa iyo kooxda daabka lagu jiro duulimaadka)
Dhibaatooyinka flyght Concord sano 2 11 bilood ka hor #714
Diyaarado fara badan halkan waa la jabay ... wax cusub ma jiraan. Concorde way fiicnaan kartaa, laakiin waxay u baahan tahay aqoon badan. Waa inaad ku wareejisaa shidaalka DHAMMAAN wakhtiga. Taasi waa habka kaliya ee loogu duuli karo si xasilloon.
Dhibaatooyinka flyght Concord sano 2 11 bilood ka hor #716
Haa waa ay jebiyeen cuz ay yihiin Airbus! LOL Waxaan ku dhaartay inaan arko farriimo dheeraad ah oo ku saabsan dhibaatooyinka leh diyaaradaha hawada qaada marka loo eego Boeing
Dhibaatooyinka flyght Concord sano 2 11 bilood ka hor #720
Dude !!!! ma ogtahay sida nidaamka wareejinta shidaalku u shaqeeyo? Waxaan isku dayay in aan la fajaco waxaa jira waxyaabo badan oo loo fiirsado oo jahwareer ka muuqdo ... ma jiraa wax qalab wax akhris ah?
Dhibaatooyinka flyght Concord sano 2 4 bilood ka hor #947
Shirku waa xayawaan ka duwan kuwii hore, oo ah sida muuqaal kasta oo duulimaadka sonic ah. Xarunta dhexe ee culeyska waa in la xisaabiyaa. Altitude waa in sidoo kale la tixgeliyaa, maadaama maqaarka diyaaradaha uu ku kululeynayo xawaare sare. Xisaabi rakaabka iyo shandadahaaga si aad udhigto culayskaaga. Ku aqri nidaamka qadka. Wax ka baro diyaaradda. Waxaa ka jira cilad qaniinyo cod ah diyaaradda oo ku adag dhegaha qaab muusiko ah oo la qaldamay. Abuuraha ayaa geliyay faylkaan galka dhawaaqa diyaaradda si qalad ah. Si aad uga takhalusto, fur furiinka codka oo dhex mara qeybaha dhawaaqa ilaa aad ka heleyso raadadkaas xun ee muusikada, ka dibna midigta guji oo tirtir, dhammaantood waa hagaagsan yihiin.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.229